Fampiharana toetrandro 6 ka tsy mahatazona anao ny toetrandro 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Iza no mbola tsy tratry ny fiambenana amin'ny toetr'andro rehefa mandao ny trano tsy misy elo? Sa nandeha nieritreritra ianao fa hangatsiaka izany ary hahazo masoandro lehibe indrindra? Noho ireo antony sy antony hafa ireo dia manana olana amin'ny fampiharana toetr'andro tsara mba hialana amin'ny hetsika tsy ampoizina. Rehefa dinihina tokoa, eo ny toetr'andro hanampy antsika.
Ankehitriny dia am-polony ny fangatahana faminavinan-toetrandro mba hialana amin'ny fotoana mahamenatra, toy ny mando any am-piasana na ny filentehan'ny masoandro amin'ny andro fitsangantsanganana ao amin'ny valan-javaboary. Izany no nahatonga an'i SeoGranada nanao an'ity lisitra ity tamin'ny tsara indrindra androany. Zahao hoe:
AccuWeather dia iray amin'ireo fampiharana toetrandro malaza indrindra. Izy io koa dia iray amin'ireo marina indrindra, manome fampahalalana momba ny toetr'andro amin'ny toetr'andro, miaraka amina endri-javatra mahafinaritra.
Ny teknolojia ampiasain'ny AccuWeather dia manome antoka ny iray amin'ireo vinavinan'ny toetr'andro azo antoka indrindra misy ankehitriny. Ny tafio-drivotra sy / na ny fiovan'ny toetr'andro tampoka dia ampitandremana amin'ny alàlan'ny fampandrenesana marina, ka tsy misy olona tratry ny trangana toetr'andro tsy ampoizina.
Ankoatry ny fanaovana izay ahafahana mijery ny vinavina anio na roa herinandro manomboka izao, AccuWeather dia manome vaovao momba ny rivotra, ny hamandoana ary ny fitsin'ny rivotra.
Raha hisintona ny AccuWeather dia safidio ny rafitra miasa: Android / iOS.
Fampiharana astronomika hijerena izao tontolo izao amin'ny fotoana tena izy
Amin'ny Climatempo dia azonao atao ny mahalala ny toetrandro na aiza na aiza. Azonao atao ny manamarina amin'ny fotoana tena izy, ankoatry ny fanananao angona isan'ora, isan'andro na amin'ny andro manaraka.
Mba hahatonga ny zava-drehetra ho tsara tarehy kokoa, azo atao ny mandray vaovao mifandraika amin'ny toetrandro ary hahafantatra ny zava-mitranga eto an-tany. tiako ity Widget avy amin'ny fampiharana, safidio fotsiny ny karazana atiny sy fidirana mivantana avy amin'ny efijery an-trano na hidin-trano.
Ao amin'ny fampiharana dia misy fampahalalana momba ny hafainganan'ny rivotra, ny fahitana, ny tsindry amin'ny atmosfera, ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro, ny hamandoan'ny rivotra, ankoatry ny hafa. Mbola manenjika tafio-drivotra ny fampiharana.
Raha te-hisintona Climatempo, safidio ny rafitra fiasa: Android / iOS.
Iray amin'ireo fampiharana be mpampiasa indrindra raha resaka toetrandro, Yahoo Weather dia manana endrika amam-bika sy mahafinaritra, mitondra sary maromaro mifanaraka amin'ny toerana, ny ora ary ny toetrandro.
Ny fampahalalana dia aseho amin'ny tatitra feno sy feno, miaraka amin'ny topy maso ny toetr'andro hatramin'ny 10 andro ho avy. Amin'ny sarintany mifandraika dia azonao atao ny mahita ny mari-pana amin'ny toerana samihafa sy ny lalana ary ny hafainganan'ny rivotra.
Ny fanairana amin'ny toetr'andro ratsy dia manampy anao amin'ny drafitra tsara kokoa ny andronao, ary koa ny sarimiaina mahaliana izay manome tahirin-kevitra toy ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro ary ny fanerena avy amin'ny atmosfera. Ny trangan'ny taratra ultraviolet (UV) dia misy ihany koa, ary koa ny hamandoan'ny rivotra.
Raha hisintona ny Yahoo Tempo dia safidio ny rafitra miasa: Android / iOS.
4. Toetr'andro sy taratra
Amin'ny vinavinan'ny toetr'andro eo noho eo, miaraka amin'i Clima & Radar dia azonao atao ny misoroka ny mari-pana mandritra ny 24 ora na 14 andro manaraka izao. Fanampin'izany, mazava ho azy, angon-drakitra am-polony hafa hitazomana ny zava-drehetra handeha araka ny nomanina azy, nefa tsy natahorana hanimba ny orana tamin'io andro io tao amin'ny valan-javaboary!
Mbola azo atao ny manamarina ny hafainganan'ny rivotra, ny fahitana, ny mety hisian'ny orana, ny fiposahan'ny masoandro ary ny filentehan'ny masoandro, ny fahatsapana hafanana, ankoatry ny fampahalalana maro hafa. Mba hananana angona marina dia azonao atao ny mampiditra ny toerana tena izy ao amin'ilay application.
Misafidiana ny toetr'andro sy ny radara, safidio ny rafitra miasa: Android / iOS.
5. Fotoana any Brezila
Iray amin'ireo teboka mahaliana indrindra ao amin'ny Tempo Brasil ny mety hananana sary mihetsika azo tanterahina izay ahafahana maka sary an-tsaina ny fiovan'ny toetr'andro haingana. Miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka, ny fampahalalana rehetra dia hita mora foana amin'ny interface intuitive.
Azonao atao ny manamarina ny toetr'andro hatramin'ny 10 andro mialoha. Rehetra ao anaty tatitra amin'ny antsipiriany, izay misy fampahalalana momba ny orana, rivotra, taratra ultraviolet, tsindry amin'ny atmosfera, ankoatry ny angona maro hafa.
Hatsaraina ho an'ny telefaona finday sy takelaka, miaraka amin'ny Tempo Brasil no ahafahanao miditra amin'ny sarintany mifandray, manamora ny fitadiavana ny toerana tena toerana misy ny toerana voafidy hanaovana hetsika na fitsidihana. Mety ho an'izay maniry fampiharana tsotra nefa mahomby.
Raha hisintona ny Tempo Brasil dia safidio ny rafitra miasa: Android / iOS.
Miaraka amin'ity rindranasa ity dia manana fampahalalana amin'ny fotoana tena izy ianao, hahafahanao mijery ny toetrandro amin'ny ankamaroan'ny tontolo. Avy any Rio de Janeiro ka hatrany Londres, manomboka any New York ka hatrany Tokyo, ianao dia miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro kely ary miomana iray andro tsy misy tranga tsy ampoizina.
Ho fanampin'ny angona momba ny maripana, ny Weather Forecast dia mampiseho fampahalalana amin'ny tatitra feno, amin'ny degre Celsius sy Fahrenheit. Azonao atao ny mahita ny tsindry avy amin'ny atmosfera, ny fahitana, ny hamandoan'ny rivotra, ny rotsak'orana amin'ny teboka samihafa amin'ny sarintany mifandray, ny hafainganan'ny rivotra sy ny lalana, ary maro hafa.
No Widget Misy fampahalalana havaozina amin'ny fotoana rehetra, hahafahana mijery ny toetrandro amin'ny andro na herinandro manaraka.
Raha te haka ny toetr'andro dia tsindrio eto.
Miaraka amin'ireo fampiharana etsy ambony, misy fampahalalana marobe momba ny toetr'andro sy ny fiovana tampoka mety hanimba ny drafitra amin'ny andro mahatalanjona. Mitandrema amin'ny orana sao tratry ny fiambenana!
Ankehitriny rehefa manana fampahalalana vitsivitsy ianao momba ny tsy ho tototry ny asa, ahoana ny fahalalanao ny fampiharana miisa 10 ary manara-maso ny fotoana sisa tavela mandra-panambadiana na amin'ilay dia mahagaga?
Mba hanomezana aingam-panahy ny fihetsem-po, dia asehonay ihany koa ny fampiharana andian-teny 8 handrisihana anao isan'andro Na izany aza, raha efa avy ny orana ary handeha ho any amin'ny toeram-piasana ianao na amin'ny oniversite dia manana fangatahana 10 hamaky boky amin'ny findainao izahay ary hankafy ny fotoana mandreraka handinihana na hialana voly.